Umbuzo Iphutha leWindows
unyaka 1 3 edlule - unyaka 1 3 edlule #1169 by TheSteelWolf
Njengomshayeli we-aviator omdala nomhlalaphansi, ngithandwa ngokwemvelo kumamodeli amadala njengeB727, B707, nezindiza ezinjengeRussia, njenge-Tu154, i-An24 njll.
Kuze kube manje angingenandaba no-B7 * 7 no-727. Kodwa uma ngizama ukufaka onobuhle baseRussia njengamaTu154 no-Antonov, ngithola iwindi lesiphambeko esinamathiselwe.
I-Tu134 isebenze kahle kodwa ngaphandle kwemidwebo ethile.
Noma yiziphi izixazululo sicela?
Siyabonga futhi sibukeka kahle
Ukuhlela kokugcina: Unyaka we-1 izinyanga ezingu-3 ezedlule TheSteelWolf. Isizathu: ukungaphumeleli